နန်းသီရိမောင် MTV အသစ် ( HD ) - GenFK.com
နန်းသီရိမောင် MTV အသစ် ( HD )
ဖိုးလပြည့် •7years ago 55 1 • 3.7K Views
MTV အသစ် ( HD )
Posted7years ago in Music & Audio
Pter Ptee7 years ago
နယ်ခြားစောင့်တပ်မှ အရာရှိတစ်ဦး ဆီမီးအော်တိုမက်တစ်ရိုင်ဖယ်ပစ်ခတ်လေ့ကျင့်နေစဉ်
မလိုချင်ဘူး .... စစ် _နီနီခင်ဇော်
This is how we end the Tournament...!!!
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံတွင်းမှာ မွတ်စလင်လူဦးရေဟာအဆမတန်များပြားလျှက်ရှိပြီး ကလေးမွေးဖွားမှု့နှုန်းကို ထိန်းချုပ်မှု့မရှိခြင်း ၊ အစိုးရအနေနဲ့ ပြည်သူတွေကို ၀လင်အောင်မကျွေးမွေးနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် ပြည်တွင်းနေမွတ်စလင်များဟာ နှစ်စဉ် ပြည်ပတိုင်းပြည်တွေကိုခိုးဝင်ကြရပြီး တိုင်းပြည်ကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးကြရပါတယ် ။ယနေ့အချိန်မှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိင်ငံသား လှေစီးဒုက္ခသည်အရေးဟာ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေအတွက် ခေါင်းခဲစရာ ဖြစ်လာတာမို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရအနေနဲ့ တစ်ခုခုဆောင်ရွက်သင့်ပါပြီ
စင်ကာပူက ကျွန်းနိုင်ငံငယ်လေးပါ အကျယ်အ၀န်းက ရန်ကုန်မြို့ သာသာ ၊ နိုင်ငံထဲမှာ အဖြူ အမည်းရောနှောပြီး အေးချမ်းစွာနေထိုင်ကြရတယ် ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအလုံအလောက်ရှိပြီး ၊ CCTV တွေနေရာတိုင်းနီးပါးတပ်ဆင်ထားတာကြောင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးပြီး စည်းကမ်းရှိကြရတယ် ၊ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ အတွေးအခေါ်အမျှော်အမြင်တွေကြောင့် ယနေ့အချိန်မှာ အာရှတိုက်ရဲ့ စီးပွားရေးတောင့်တင်း...
တပ်မတော်သားများအား ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် " ယုံကြည်ရာ "
ပွိုင့်၂၂၀၂ကို ခြေမှုန်းခြင်း ကိုးကန့်သောင်းကျန်းသူတွေတပ်စွဲထားတဲ့ ပွိုင့်၂၂၀၂ဟာ လောက်ကိုင်ဒေသတစ်ဝိုက်မှာ အမြင့်မားဆုံးတောင်တန်းဖြစ်ပြီး မတ်စောက်ခြင်း ကျောက်တောင်တန်းများဖြစ်တာကြောင့် သမားရိုးကျ ခြေလျှင်တပ်များဖြင့် တိုက်ခိုက်သိမ်းယူရန် အသက်သွေးချွေးများစွားစတေးရမှာ ဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့် ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေအနေနဲ့ " အမှုန့်ချေ တက် သိမ်း " နည်းဗျူ ဟာက...
TNLAပလောင်တပ်မှ ရွာသားများအား ဖမ်းဆီးနှိပ်စက် ================================== ရွာသားတွေကို အဓမ္မလူသစ်စုတယ် ပြီးရင် အဓမ္မသင်တန်းတက်ခိုင်းတယ် စိတ်ဆန္ဒမပါတဲ့သူတွေကို ကိုယ်လူမျိုးအချင်းချင်တောင် ငဲ့ညာမှုမရှိဘူး သေရင်သေပစေဆိုပြီး အပြစ်ပေးတယ် ပြီးတော့ ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲဆိုရင် ၀ အဖွဲ့ရဲ့ ထောက်ခံမှုရဖို့ KIA အဖွဲ့ရဲ့ အကူအညီရဖို့ ဖုန်ကြားရှင်အဖွဲ့ရဲ့ ပေးစာကမ်း...
သင်္ကြန်သီချင်းသစ်တစ်ပုဒ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် တိုက်ပွဲတွေကြားက စိတ်ညစ်ညူးမှူ့ တွေ ပျောက်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းပါစေ . . . " လူပျိုကြီးသင်္ကြန် " ရေး/ဆို ဝေလ